Villa Soomaaliya oo faragelin Xooggan ku hayso qabsoomidda Shirka Muddulood | Keydmedia
Villa Soomaaliya oo faragelin Xooggan ku hayso qabsoomidda Shirka Muddulood
Shirka Muddulood ayaa dhowr jeer dib u dhacay, waxaana loo sababeynaa fara gelinta madaxtooyada Soomaaliya.
Muqdisho, Soomaaliya - Madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay inay faragelin xooggan ku heyso qabsoomidda Shirka dhaqanka Mudullood, kaasoo la qorsheynayay inuu dhaco 13-ka bishan oo ku beegneyd maalinimadii Isniinta ee lasoo dhaafay.
Shirka oo qaban qaabadiisa ugu dambeysay maalmahaan laga waday Muqdisho ayaa furmi waayay, sababo la xiriiro faragelinta Farmaajo, isagoo u adeegsaday siyaasiyiin beesha kasoo jeeda, oo Villa Soomaaliya u shaqeeya, sida ay Keydmedia Online u xaqiijiyeen xubno ka tirsan qaban-qaabiyaasha Shirka.
Dhamaan qeybaha kala duwan ee dhaqanka Mudullood oo leh Mucaarad iyo Muxaafid, uguna horeeyo Ugaaska Beesha Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa isugu yimid habeenkii Isniinta Mowlaca Macalin Nuur oo ku yaallo degmada Hodan, iyadoo halkaas la isku saamaxay, laguna heshiiyay in shirka isniinta dhaco.
Martida Shirkaan lagu casuumay ayaa gaareysay 750, kuwaasoo 100 kamid ah lagu daray guddiga qaban qaabada oo uu hoggaaminayo Yuusuf Xuseen Jimcaalle Madaale, halka 500 loo qeybiyay beelaha Mudullood, waxaana 100 soo haray lagu bixiyay qaab mudnaan ah oo la siinayo madaxweynayaashii hore ee dalka, axsaabta Siyaadda, Culumada iyo qeybaha kale.
Hadaba iyadoo jadwalka sidaas ahaa ayaa laga war helay in Casuumaadii la qeybiyay uu faraha ka baxay, islamarkaana ay gacanta ku dhigeen koox u badan xoogaga wadaniyiiinta isku magacaabay, oo ay horkacayaan rag ay ka mid yihiin Salaad Cali Jeelle, Sheekh Cali Wajiis, Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow iyo mas'uuliyiin kale.
Guddoomiyaha Guddiga qaban-qaabada Shirka Yuusuf Madaale ayaa tagey Cali Mahdi iyo Senator Muuse Suudi Yalaxow isagoo ashatako ah, waxaana la sheegayaa in la isku afgartay in la joojiyo shirka maadaama koontaroolkiisa lumay, ayna carqaladeynayaan Madaxa Villa Soomaaliya.
Shirka oo hada dib u dhac ku yimid ayaana si rasmi ah loo ogeyn goorta la qabanayo, hase yeeshee Wararka ayaa sheegaya in Gogosha weli furantahay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Madaxtooyada Soomaaliya ay lacag ku bixineyso sidii shirkaas ajandihiisa u bedeli laheyd ama u baaji laheyd.
Xoogaga wadaniyiinta oo ah koox u dhisan taageeridda Madaxweyne Farmaajo waxaa hoggaaminaya rag xilal ka haya dowladda iyo mas'uuliyiin hore oo calooshood u shaqeystiyaal ah, sida Salaad Cali Jeelle iyo Cali Maxamed Geedi, oo mushaar ka qaata Madaxtooyadda.
Farmaajo ayaa u arka qabsoomida shirka Mudullood mid dhabar jab ku ah damaciisa inuu kursiga kusoo fadhiyo, oo uusan qaban doorasho sidoo kalena aan la isagu imaan ka hadalka maqaamka gobolka Banaadir, maadaama dowladiisa ku waynayso dhaqaalaha ay ka hesho Muqdisho shacabkeeda.